अशक्त भएर पनि विश्व जित्न सफल व्यक्तिहरु
उनले सन् २००९ मा ‘योङ अष्ट्रेलियन अफ द इयर’ अवार्ड जितेका थिए । उनको कार दुर्घटनामा भएको थियो । उनलाई डाक्टरले मृत घोषणा गरेका थिए । उनको मुटु तीन मिनेट तीस सेकेण्डसम्म रोकिएको थियो । उनको टाउकोमा गम्भिर चोट लागेको थियो । उनको दाहिने खुट्टा र दाहिने हातमा पनि धेरै फ्याक्चरहरु भएको थियो । उनलाई डाक्टर अशक्त भएको र बाँकी जीवनमा ह्वीलचियरमा जीवन बिताउनु पर्ने बताएका थिए । उनको आत्मविश्वासका कारण उनी छिटो नै निको भए । त्यो घटनापछि पुर्ण ठिक भएपछि उनले भनेका थिए,‘तपाईले निर्णय लिनुहुन्छ त्यसले तपाई को हो भन्ने बुझाउँछ ।’
राल्फ अमेरिकामा जन्मिएका हुन् । उनीको ह्वीलचियर बनाउने कम्पनी रहेको छ । विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुमा उनको कम्पनी मार्फत ह्वीलचियर बेच्ने काम गर्छन् । ६ वर्षको उमेरमा मस्कुर डिसट्रोफी भएपछि उनले २० वर्षको मोटराइज स्कुटर निर्माण गरेका थिए । उनले त्यसपछि ब्राउन कर्पोरेशन फर्म खोलेका थिए । उनले आफ्नो सोचलाई फराकिलो पार्दै गए र सफलता हासिल गर्न सफल भए । सन् २०१२ मा अमेरिकन सरकारले उनलाई ‘च्याम्पियन अफ चेन्ज’ नाम दिइयो ।
क्रिस्टोफर अमेरिकन डाक्टर, निर्देशक, फिल्ममेकर तथा एक्टिभिस्ट पनि हुन् । उनी अशक्त व्यक्तिहरुलाई उत्साह पैदा गर्ने एक उदाहरण पनि हुन् । उनी आफ्नो कमिक बुकका लागि पनि प्रख्यात रहेका छन् । उनको किताब ‘सुपर हिरो’, ‘सुपरम्यान’ । घोड सवारी गर्ने क्रममा लडेपछि उनीलाई प्यारालाइसिस भएको थियो । हिडडुल गर्न नसक्ने भएपछि उनी आत्महत्या गर्न समेत लागेका थिए । तर परिवारको सहयोगका कारण उनको नयाँ जीवन सुरु भयो । उनी उपचारका लागि इजरायल गए । त्यहाँ विभिन्न सुविधा लिदै उनको उपचार भयो । टाउकोमा गम्भिर चोट लागेका सयौ बिरामीसँग उनले छलफल गरे ।
६. फ्रयाक्लिङ डि. रोसेभेल्ट
रोसेभेल्ट अमेरिकन वकिल तथा राजनीतिज्ञ हुन् । उनी अमेरिकाका ३२ औ राष्ट्रपति हुन् । राष्ट्रपति हुनुभन्दा पहिले उनी पोलियो र प्यारालाइसिससँग जुधेका थिए । उनले धेरै खाले थेरापी लिए । उनको कम्मर मुनिको भाग चल्थेन । पोलियोसँग लड्न उनले हाइड्रो थेरापी समेत लिने गरेका थिए । उनको राष्ट्रपति चुनावी प्रसारमा उनको अशक्ततताबारे बाहिर ल्याइएको थिएन । जीवनमा यति धेरै संघर्ष गरेका उनलाई जनताले विश्वास गर्दै जिताएका थिए । उनले त्यसपछि अमेरिकामा आर्थिक विकासमा जोड दिएका थिए । दोस्रो विश्व युद्धबाट अमेरिकालाई जोगाउन हरसम्भव प्रयास गरेका थिए तर अन्तिम समयमा अमेरिकाले विश्वयुद्धमा भाग लिएको थियो ।
७. स्टेफेन हकिङ
उनको शारिरीक अवस्था एकदम कजमोर भएपनि उनको विचारले विश्वलाई नयाँ बाटो देखाउन सफल भएको थियो । उनी राम्रोसँग बोल्न पनि सक्दैनथे । उनको आवाज बुझ्नलाई एउटा डिभाइसको प्रयोग गरिएको थियो । उक्त डिभाइसका कारण उनको आवाज बुझ्ने र अध्ययन गर्ने काम गरिएको थियो । उनलाई अल्बर्ट आइनस्टाइन अवार्ड, अल्बर्ट मेडल तथा प्रेसिडेन्सियल मेडल अफ फ्रिडम मेडलबाट सम्मान गरिएको छ । अशक्त भएर नी यत्तिको सफलता पाउने व्यक्तिमा उनी पहिलो स्थानमा पर्छन् ।
८. हेलेन केलर
अमेरिकन लेखक तथा राजनैतिक एक्टिभिष्ट रहेकी हेलेन केलर पनि अशक्त महिला हुन् । उनी जन्मदा ठिकै थिइन् तर एकवर्षपछि उनको शरिरमा एक्युट डिजिजको विकास भएको थियो । उनलाई उक्त रोगले बहिरो र दृष्टिबिहिन बनायो । उनको जीवनमा एक शिक्षिकको आगमन भयो । पर्किन्स इन्स्टिुट फर द ब्लाइण्डका एनी सुलिभानले उनलाई पढाउने काम गरेका थिए । हेलेनले कसरी सञ्चार गर्ने भन्ने कुरा उनीबाट सिकेकी थिइन् । आत्मविश्वासकै कारण उनले आफुलाई अशक्त हुदाँ नी परिष्कृत बनाउँदै लगिन् । उनले अशक्त हुदाँ नी पढ्ने क्षमता देखाइन् । उनले व्याचलर अफ आर्टस डिग्री गरेकी थिइन् । विभिन्न सांकेतिक भाषा बुझ्न दख्खल भएकी हेलेन उत्प्रेरक लेक्चर समेत दिने गर्थिन् । उनकै नाममा हेलेन केलर इन्टरन्यासनल अर्गनाइजेसन स्थापना गरेकी थिइन् । उनको यस संस्थाले विभिन्न विधामा अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ ।
९. जोन मिल्टन
१०. निकोलस जेम्स भुजिक्स
अष्ट्रेलियाका निकोलस जेम्स विश्वमै सबैभन्दा थोरै जनालाई हुने समस्या फोकोमेलिया बाट ग्रसित थिए । उनको हातहरु, खुट्टाहरु थिएनन् । स्कुलमा उनी मजाकका पात्र बन्ने गर्ने । उनलाई प्रोत्साहन गर्ने र उनको आत्मविश्वास बढाउने काम गरिएन । उनले सघंर्ष गर्दै अगाडि बढे । अन्तत उनले कर्मश विषय लिई ग्रयाजुएट भए । हाल उनी विश्वका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा प्रोत्साहन गर्ने वक्तब्य दिने काम गर्छन् ।
सन् १९९० मा उनलाई ‘अष्ट्रेलियन योङ सिटिजन’ को अवार्डबाट सम्मानित गरिएको थियो । उनी विश्वभरका मानिसहरुलाई विभिन्न तरिकाले उत्प्रेरणा दिने काम गर्छन् ।
मेगा बैंकद्वारा सेनालाई वित्तीय साक्षरता
काठमाडौँ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले कञ्चनपुरमा नेपाली सेनालाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गरेको छ । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित देवीदल गणमा कार्यरत नेपाली सेनाका बिभिन्न दर्जालाई बैंकले वित्तीय साक्षर
मल्चीङ प्रविधिमा गरिएको तरकारी खेती
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका– ३ का किसानले मल्चीङ प्रविधिमा गरेको तरकारी खेती ।